Ciidanka DANAB oo sheegay inay qabteen Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab - Awdinle Online
Ciidanka Kumaandooska Soomaaliya ee Danab ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen Sarkaal sare oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-shabaab, kaasi oo ay sheegeen in ay kasoo qabteen qaybo ka mid ah Gobolka Shabeellaha hoose.
Saraakiil ka tirsan Ciidanka Kumaandooska Soomaaliya ee Danab ayaa sheegay in gacanta ku dhigen Sarkaal ka tirsan Al-shabaab oo sida ay sheegeen u qaabilsanaa dilalka qorsheysan.
Sarkaalka ayaa Magaciisa lagu sheegay Maxamuud Maxamed Sheikh Cali oo si dhuumaalysi ah ku joogay Degmada Walaweyn ee Gobolka Shabellada Hoose, waxaana intaas ay ku dareen Saraakiisha Danab in ay kusoo qabteen howlgal ay sameeyeen.
Ciidanka Kumaandooska Soomaaliya ee Danab ayaa inta badan waxaa ay sameeyaan howlagallo ballaaran oo ay kusoo qabtaan xubno ka tirsan Al-shabaab.
Previous articleDiyaarado duqeyn ka geystay degaano ka tirsan Gobolka Gedo
Next articleDowladda Soomaaliya oo ka hadashay dagaalkii & banaanbixii Beledweyne